QM oo shaacisay natiijada baadhitaanka geeridii Morsi Sidee loo fuliyey dilkiisa? – Xeernews24
QM oo shaacisay natiijada baadhitaanka geeridii Morsi Sidee loo fuliyey dilkiisa?
9. November 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Guddi madax-banaan oo ah khuburada Qaramadda midoobay ayaa ku dhowaaqay in dhimashii madaxweynihii hore ee dalka Masar Mohamed Morsi ee bishii June, ay u eg tahay “dil aan sabab lahayn” oo ay ka dambeysay dowladda dalkaas.
“Morsi waxaa lagu hayey xaalad lagu qeexi karo arxan-darro kaliya, gaar ahaan intii lagu guda jiray shantii sanno ee lagu hayey xabsiga Tora” waxaa sidaas lagu yidhi bayaan laga soo saaray xafiiska madaxa guddiga sare ee QM ee xuquuqda aadanaha.
Dhimashii Morsi “kadib markii uu maray xaaladahan, waxaa lagu qeexi karaa dil ay dowladda dooneysay oo aan sabab lahayn” ayaa lagu shaaciyey bayaanka.
Morsi, oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka Masar ee loo doorto si dimoqraadi ah, ayaa geeriyooday 17-kii June isaga oo hortaagan maxkamadda ku taal magaalada Qaahira kadib markii uu sara joogga ka dhacay.
Guddiga khuburada QM oo uu hoggaaminayey Agnes Callamard ayaa warbixintooda ku sheegay in dowladda madaxweyne Sisi ay xabsiyada dakaas ku gaysanayso xadgudubyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, oo si “ku talo-gal ah” loo fulinayo.
Morsi ayaa waxa uu xabsiga ku jiray muddo lix sanno ah, waxaana guddiga QM ay sheegeen “in loo diiday daryeel caafimaad oo noloshiisa bad-baadin karay, isaga oo qabay cudurrada sonkorta iyo dhiig-karka.”
Khuburada ayaa sheegay in mas’uuliyiinta dowladda Masar “marar badan looga digay” xaaladda caafimaad ee sii xumaaneysay ee Morsi, ilaa ay ka gaartay “heer ay dishay.”
“Ma jiro wax caddeymo ah oo muujinaya in mas’uuliyiinta ay isku dayeen inay wax ka qabtaan walaacyada laga arki karo cawaaqibka ka dhalan kara.” Ayaa lagu yidhi bayaanka.
Khuburada ayaa sheegay in dhibaatadii Morsi ku soo maray xabsiga ay ahayd qorshe dil oo sannado socday ugu dambeynna Morsi uu ku geeriyooday.
Mas’uuliyiinta dowladda Masar weli kama aysan jawaabin natiijada baadhitaanka guddiga QM.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/06/Mursi.jpg 372 620 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-11-09 08:32:562019-11-09 08:32:56QM oo shaacisay natiijada baadhitaanka geeridii Morsi Sidee loo fuliyey dilkiisa?
Rasaas goos-goos ah ayaa caawa laga maqlay magaalada Cadaytu Dowlada Ethiopia oo sirasmi ah ula wareegtay hogganka IGAD (Sawiro)